२०२१ को लागि Lead नेतृत्व प्रवृत्ति - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B7B बजार समाचार
२०२१ का लागि Lead नेतृत्व प्रवृत्ति
सम्पादकको पिक अप्रिल 2, 2021 मार्च 31, 2021 नील व्हाइट B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
सकारात्मक कार्य संस्कृतिहरूको एक महत्त्वपूर्ण अंश भनेको समुदायको भावना हो।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ टोलीलाई आराम गर्न अनुमति दिनुहुन्छ जब तिनीहरूलाई आवश्यक पर्दछ।
एक नेताले उनीहरूको शक्ति आक्रामक ढंगले चलाउन भन्दा उनीहरू निष्पक्ष भएर वफादारीको लागि प्रेरित गर्न सक्दछन्।
व्यापार मा, नेतृत्व सबै कुरा हो। तपाईको टोलीका लागि विज्ञहरूको टोली भर्ती गर्न सजिलो छ, तर तिनीहरूलाई कार्य पूरा गर्नको लागि मार्गनिर्देशन त छैन। तपाईं उपकरण वा सफ्टवेयरको साथ काम गर्दै हुनुहुन्न, यसको मतलब सख्त र जिद्दी दृष्टिकोणले तपाईंलाई कुनै राम्रो गर्दैन। व्यापार मा सफलता प्राप्त गर्न, तपाईं एक साँचो नेता हुनुपर्छ। समस्या यो छ, यो प्राप्त गर्न को लागी मुश्किल छ जस्तो लाग्छ।
जहाँसम्म, तपाईंको नेतृत्व कौशल सुधार गर्न र व्यवसायीक प्रयासको माध्यमबाट तपाईंको टोलीलाई व्यवस्थित गर्न त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। २०२१ को लागि केहि नेतृत्व प्रवृत्तिहरू हेरौं र कसरी तपाइँ तपाइँको व्यवस्थापनमा तिनीहरूलाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
एक असल नेताले जहिले पनि कार्यस्थलमा सकारात्मक संस्कृति सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ।
सकारात्मक कार्य संस्कृति निर्माण गर्दै
A राम्रो नेता कार्यस्थलमा सँधै सकारात्मक संस्कृति सिर्जना गर्ने दिशामा सधैं प्रयास गर्नुपर्छ। एक विषाक्त कार्य वातावरणले दुबै कर्मचारी मनोबल र उत्पादकतालाई असर गर्न सक्छ। यदि कर्मचारीहरूले मूल्यवान ठानेनन्, वा तिनीहरू महसुस गर्छन् कि तिनीहरू केवल एउटा मेशिनमा एक कुग हो भने, तिनीहरू उत्प्रेरणा गुमाउने बढी सम्भावना हुन्छन्। यही कारणले आजका व्यवसायी नेताहरूले तपाईका कर्मचारीहरूलाई मूल्यवान तुल्याउने र उनीहरूलाई परिवार जस्तो व्यवहार गर्ने महत्त्वलाई जोड दिन्छन्।
सकारात्मक कार्य संस्कृतिहरूको एक महत्त्वपूर्ण अंश भनेको समुदायको भावना हो। तपाइँको टोली सदस्यहरूले महसुस गर्नुपर्दछ कि तिनीहरू वास्तविक टीमको भाग हुन्। औंठाको राम्रो नियम भनेको एक अर्काको बिरूद्ध कर्मचारीहरू खसाल्दैन। जबकि प्रतिस्पर्धा को एक स्वस्थ खुराक केहि लाइन को काम को लागी महान हो, अन्य लाई ज्यादा लाभ छैन। यदि कर्मचारीहरूले केही सुविधाहरू वा रोजगारीको सम्भावनाको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने, सम्भवतः केही असन्तुष्टि बढ्न शुरू हुन्छ। यसले टीम वर्क र सहयोगलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ।
यदि तपाईं अफिसमा हुनुहुन्छ भने, कामदारहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र निजीकृत गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् ता कि उनीहरू घरमै बढी महसुस गर्छन्। यसले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, किनकि उनीहरूले एकै दिन एकै नीरस र अपरिवर्तनीय डेस्कलाई देख्नुपर्दैन।
भलाईलाई प्राथमिकता दिँदै
तपाइँका कर्मचारीहरूको मानसिक र शारीरिक कल्याणले कार्यक्षमतादेखि कार्यस्थल मनोबलसम्म सबैलाई असर गर्छ। यो तपाइँको शीर्ष प्राथमिकता हुनुपर्छ जब तपाइँ परिवर्तन लागू गर्न निर्णय जब कर्मचारीहरु लाई असर गर्न सक्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ टोलीलाई आराम गर्न अनुमति दिनुहुन्छ जब तिनीहरूलाई आवश्यक पर्दछ। यदि एक कामदार बिरामी मा कल, सबैलाई संक्रमित जोखिम भन्दा भन्दा उनीहरूको वचन मा भरोसा गर्न राम्रो छ। जब त्यहाँ व्यस्त दिन हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई धेरै कठोर पार्नुहुन्न। यदि तिनीहरू जलाइन्छ भने, तिनीहरू फलदायी हुँदैनन्, र तिनीहरूले अन्तमा तपाईंसँग रिसाउने छन्। परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् जसले कामदारहरूलाई स्वस्थ र स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ। यसले उनीहरूलाई प्रेरणाको साथ सहयोग गर्दछ र कार्यस्थललाई स्वस्थ वातावरण बनाउँदछ।
संगठन सफल हुन सबै तहमा स्वस्थ हुनु आवश्यक छ। नेतृत्व रणनीति बनाउँदा यसलाई दिमागमा राख्नुहोस्।
एक परिवर्तन-खुशी मानसिकता अपनाउने
व्यवसायलाई आजको गतिशील र अप्रत्याशित बजारमा बाँच्नको लागि विकास गर्न आवश्यक छ। नेताले पहिचान गर्नुपर्दछ जब यो समय परिवर्तनहरू परिचय गर्ने समय हो, चाहे ती बाह्य वा आन्तरिक दबाबका कारण हुन्। परिवर्तन नभएको कम्पनी विकसित प्रतिस्पर्धाको तुलनामा पछाडि झर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
यो अव्यवस्थित वातावरणमा परिवर्तन स्वीकार्न गाह्रो हुन सक्छ जुन हामीले व्यवसायलाई बोलाउँदछौं। यसै कारण अवसरवादी रूपमा सोच्न यो महत्त्वपूर्ण छ। विशेष परिवर्तनले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउन सक्छ? अचानक परिवर्तनको उत्तम प्राप्त गर्न तपाईं कुन कोण खेल्न सक्नुहुन्छ? जे भए पनि त्यहाँ अप्रत्याशित परिस्थितिले तपाईंको व्यवसायलाई नकारात्मक असर पार्दछ, तपाईं सम्भवतः यसलाई आफ्नो पक्षमा बदल्न सक्नुहुन्छ, वा यससँग आउने मुद्दाहरूलाई शान्त पार्न सक्नुहुन्छ।
स्थापित कार्यप्रवाहको पुनर्विचार गर्दै
अफिस चलाउन एक भन्दा बढि तरीकाहरू छन्। विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई यो पाठ पहिलो पटक सिकायो, कुनै पन्चहरू तान्न बिना। जब त्यहाँ कार्यप्रवाह सुधार गर्ने अवसर हुन्छ, तपाईंले यसलाई द्रुत रूपमा लिनु पर्छ।
धेरै अफिसहरू कडा र पुरानो जमानाको वर्कफ्लोको प्रणालीबाट अझ आधुनिकमा सारिएको छ। केहीले रिमोट कार्यलाई पूर्वनिर्धारितको रूपमा स्वीकारेका छन्, किनकि यसले कम्युटहरू हटाउँदछ र कामदारहरूको लागि अधिक खाली समयको लागि अनुमति दिन्छ। अरूले चार-दिन कार्य हप्ताको साथ १०-घण्टा workdays प्रयोग गरेका छन्।
यो पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यस प्रकारको परिवर्तनले व्यवसायलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ। यदि त्यहाँ कार्यालयमा कर्मचारीहरू उपस्थित हुन आवश्यक भएन भने, टाढाको प्रणालीमा स्विच गर्दा मनोबल सुधार हुन्छ र अफिस चलाउन लागत कम हुन्छ।
खराब नेतृत्व शैलीहरू मेटाउँदै
नेताहरूले आफ्ना शक्तिको बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ र अनावश्यक कार्यहरूको लागि तिनीहरूको स्थानको फाइदा लिनु हुँदैन। कर्मचारीहरूले उनीहरू एक तानाशाहीको शासन अन्तर्गत भएको महसुस गर्नु हुँदैन। एक नेताले उनीहरूको शक्ति आक्रामक ढंगले चलाउन भन्दा उनीहरू निष्पक्ष भएर वफादारीको लागि प्रेरित गर्न सक्दछन्।
धेरै शुरुवात उद्यमीहरूले महसुस गर्दैनन् कि उनीहरू तर्फ झुका छन् अधिनायकवादी नेतृत्व। यो सजिलो गल्ती हो जब तपाईं सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। कामदारहरूलाई उनीहरू भन्दा बढी गर्न दबाब दिनु एक नकारात्मक कार्य वातावरण लाई बढावा दिन एक राम्रो तरिका हो। आलोचना भएको बेला रिस थाम्नु अर्को साधारण त्रुटि हो। दुबै रोजगारदाता र कर्मचारीले व्यवसाय सुधार गर्न खोज्दछन्, किनकि यसले दुबैलाई फाइदा गर्दछ। रचनात्मक आलोचना स्वागत छ र यो तपाइँको कर्मचारीहरु बीच प्रोत्साहन। यसले तपाईंलाई एक नेताको रूपमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, र यसले तपाईंको टीमको मानसिकतामा नयाँ नयाँ अन्तर्दृष्टि निम्त्याउन सक्छ।
स्वस्थ संचार स्थापना गर्दै
व्यापार मा, संचार बाहेक अरु केहि महत्त्वपूर्ण छैन। चाहे तपाइँ आफ्नो मालिक वा तपाइँका कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ विचार र अवधारणाहरू पार गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
प्रश्नहरू सोध्नुबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। कुनै पनि दुविधा वा उनीहरूसँग कामका सवालमा मुद्दा आउन कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। कहिलेकाँही समस्याहरू तपाईको नाक मुनि हुन सक्छन्, र तपाईंलाई ती बाहिरी इनपुटको आवश्यकता पर्न सक्छ। एक राम्रो नेता सुन्छ र त्यसपछि कार्य योजना को सूत्र दिन्छ।
राम्रो दृष्टिकोण प्राप्त गर्न तपाईको टोलीका प्रत्येक सदस्यसँग सञ्चार च्यानलहरू स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो विशेष रूपमा टाढाका कर्मचारीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि उनीहरू प्रायः उपेक्षित हुन्छन्। तपाईंले याद गर्नुहुन्न कि तिनीहरूको समस्याहरू सुन्न सम्म उनीहरूसँग मुद्दाहरू छन्।
समुदायको भावना सुधार गर्न र रिमोटको कर्मचारीहरूलाई गतिमा ल्याउन, तपाईंले नियमित भर्चुअल बैठकहरू सेट अप गर्नु पर्छ। सहि संग भिडियो कन्फरेन्सिंग प्लेटफर्म र एक राम्रो रणनीति, तपाईं टाढाका कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र उनीहरूलाई उनीहरूको टोलीको हिस्सा भएको जस्तो महसुस गर्नुहुनेछ। कर्मचारीहरूको ठूलो संख्याको साथ प्रश्न र उत्तर सेवा र नेटवर्कि options विकल्पहरूको साथ अधिक जटिल सम्मेलनहरू सेट अप गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्। यसले कर्मचारीहरूलाई जडान गर्न र एक बैठक पछि सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
सामाजिक मुद्दाहरुमा अडान लिदै
छविले आजको व्यापार रणनीतिहरूमा ठूलो भूमिका खेल्छ। तपाईं प्रत्येक एकल गैर-व्यापार सम्बन्धी विषयबाट टाढा हुन सक्नुहुन्न र एकै समयमा मानिसहरू समक्ष पुग्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। ग्राहकहरू जान्न चाहन्छन् कि उनीहरूको विचार बनाउनु अघि तपाईंको व्यवसाय केहि समस्याहरूको साथ खडा हुन्छ।
उपभोग को नैतिक पक्ष पहिले भन्दा धेरै माथि ल्याइएको छ। खुला वातावरणमा वातावरणीय शीर्षकहरुमा छलफल गर्नु महत्वपूर्ण छ। यदि तपाईंको कम्पनीले केहि उत्पादन गर्दछ भने, व्यक्तिहरू यो जान्न चाहन्छन् कि यो पुनर्नवीनीकरण योग्य छ कि छैन र उत्पादन प्रक्रिया वातावरण मैत्री छ कि छैन।
दृढ अडान लिनुहोस् जब यो लोकप्रिय छलफलको कुरा आउँछ। त्यहाँ योग्य कारणहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो रायमा आवाज दिन सक्नुहुन्छ। सबै जना समुदाय सुधार गर्न र उनीहरूलाई खाना, आश्रय, र शिक्षा जस्ता चीजहरू प्रदान गर्न बोर्डमा जान सक्छन्। जबकि केही खास कारणहरूको लागि समर्थन निहित हुन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले राम्रो नेतृत्व देखाउनुहोस् र तपाईंको कम्पनीको भूमिकालाई जोड दिनुहोस जब यो खास कारणहरूको लागि आउँदछ।
व्यापारको नेतृत्व गर्नु कुनै सजिलो कार्य छैन। तपाईंले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई देखाउन आवश्यक छ कि तपाईं सम्झौता गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, जबकि फर्म हात भएकोले उनीहरूलाई डो .्याउँदछ। यो नाजुक सन्तुलन हो जुन ज्ञान र अनुभवको आवश्यक पर्दछ। अन्य उद्यमीहरूले गरे जस्तै उस्तै गल्तीहरू गर्नबाट बच्न, तपाईंले माथिको केहि सूचकहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। तपाईं एक दिन पछि एक परिपूर्ण नेता हुनुहुनेछैन, तर तपाईं त्यहाँ छिटो पुग्नुहुनेछ यदि तपाईंलाई कहाँ सुरु गर्ने थाँहा छ भने।
व्यापार सल्लाह सांप्रदायिक समाचार नेतृत्व
सिड्नीका एक जीवन शैली पत्रकार।
जवाफ छाड्नुस् जवाफ रद्द
तपाईंको आवाज सुन्न दिनुहोस्! आज सम्मिलित हुनुहोस् नि: शुल्क खाताको लागि दर्ता गरेर।
आईआरएस बेरोजगारी लाभ मा कर पुन: गणना गर्न - फिर्ती मे मा शुरू गर्न
Re कारणहरू किन तपाईंको व्यवसायलाई टेक समर्थन चाहिन्छ
आईआरएसले मासिक बाल कर क्रेडिटका लागि योग्य हुन सक्ने million 36 मिलियन भन्दा बढी परिवारलाई पत्र पठाउँदै - भुक्तानी जुलाई १ 15 देखि सुरु
तपाईंको व्यवसायको लागि for उत्तम डिजिटल मार्केटिंग रणनीति
3 सेवाहरू भाँडामा कि ग्राहक सेवा सुधार
Car कार सुधारहरू तपाईं आफैले गर्न सक्नुहुन्छ
कसरी तपाईंको व्यवसाय प्रतिस्पर्धा को अगाडि रहन सक्छ
Super सुपर-फूडहरू तपाईंले आफ्नो आहारमा थप्नु पर्छ
सर्वश्रेष्ठ साहसिक यात्रा गन्तव्यहरू
अगाडि हेर्दै - कसरी अमेरिकी उद्धार योजनाले २०२१ करहरू लाई प्रभावित गर्दछ, भाग १
सामाजिक मिडिया फिडहरू - यसले स Eng्लग्नता बढाउन कसरी मद्दत गर्दछ
10 तपाईंको छोरीको लागि अनौंठो र रमाईलो उपहार
क्लाउड एन्डपोइन्ट प्रोटेक्शन सेवा मार्केटमा सार्वजनिक डिमांडको वृद्धि हुन्छ
हवा प्रदूषण नियमहरु को बढ़ती मात्रा कण मैटर सेन्सर बजार ड्राइव गर्न
भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हेरचाह मेडिकल बेड र स्ट्रेचर मार्केट
टेक्नोलोजीमा एआईको राइजिंग एप्लिकेसन फार्मास्यूटिकल उद्योगमा प्रयोग गरिएको बजारको बृद्धि गर्दछ
बढ्दो उपभोक्ता मांग स्मार्ट कुञ्जी बजार बढ्दछ
उपभोक्ता विकल्पहरूले लिनोलेनिक एसिड बजार बढाउँछन्
एंटी-नक्कली फार्मास्यूटिकल प्याकेजिंग बजार बढेको जालसाजी औषधि उद्योगबाट बढ्दै
सबस्टेशन अटोमेसन र डिजिटल रिले मार्केट ग्रोथको प्रवर्धनको उपयोगकर्ता मैत्री
दुखाई राहत र कम्फर्टले हेमोर्रोइड ड्रग्स बजार बढाउँदछ
मागले इलेक्ट्रोनिक ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड बजार बढाउँछ
कारखाना प्रत्यक्ष थोक र B2B बजार कम लागत नेता
खरीद बिक्री बिक्री आपूर्तियों थोक र B2B बजार कम लागत नेता
खरीद र गहना बेच्नुहोस् - थोक र B2B बजार कम लागत नेता
खरिद गर्नुहोस् र लुगा बिक्री - थोक र B2B बजारको कम लागतको नेता
जापानको B2B बिक्री थोक र B2b बजार कम लागत नेता
क्यान्डी थोक / B2B बजारको कम लागतको नेता खरीद र बेच्नुहोस्
ईस्टपोइन्टे मेयर जून १th औं घटना इभेव्हरवाद र गोप्य अनुदान अनुप्रयोग भन्दा बढी आगो मुनि छन्
मूल बन्डा: एक उचाइमा मूलधारको रापर
IRS बहुभाषी र वैकल्पिक ढाँचाहरूको विविधतामा जानकारी र संसाधन प्रस्ताव गर्दछ
ईमेल मार्केटिंग फनेलहरू - कसरी एक रूपान्तरण गर्ने सिर्जना गर्नुहोस्
फादर्स डे आईडियाज - Common साझा उपहार तपाईंको बुबाले पहिल्यै पाइसकेका हुन सक्नुहुनेछ (र उसलाई के सट्टा दिने)
मानसिक रोग - बन्दुक अपराध मा एक प्रमुख कारक
KNEEOFFMYNECK आन्दोलन संस्थापक: जुन जुन १ History औं इतिहास जोड दिनु पर्छ, तब मनाउनु
तपाईको व्यवसायको क्षमता बढाउने W तरिकाहरू
क्रेताको एजेन्टले के गर्छ र कसरी राम्रो खोज्न सक्छ
महिलाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूरकहरू के के हुन्?
तपाइँको इको-मैत्री व्यवसाय को लागी एक अनुप्रयोग कसरी बनाउने
VPS बनाम क्लाउड होस्टिंग - शीर्ष Dif भिन्नताहरू तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ
Team टीम खेल यस ग्रीष्म Tryतुमा प्रयास गर्न
Rs प्रबन्धकहरुका लागि भावनात्मक खुफिया सल्लाह
TI-Signed Rapper National Doe B दिन जून १ 13